प्रेमको दुनियाँमा मेरो रेखा ! « Postpati – News For All
मेरो प्यारो राजा रेख !
मलाई माया गरेको भन्दा पनि ‘माया गर्छु’ भनेर भनेको सुन्न बढि मन पर्छ । त्यसैले त बारम्बार हजुरको मुखबाट प्रेमालापहरु सुन्न चाहन्छु । मलाई हरेक पटक हजुरले साथ दिन्छु र मसँग हुने बाचा बन्धनहरु गरेको सुन्न मन लाग्छ । साच्चै हजुरको विश्वास जित्ने कुनै उपाय गर्न पाए हुन्थ्यो झैँ लाग्छ । हजुरको जीवनभर एक प्रेमीका भएर जीउन चाहन्छु । तर विडम्बना, यथार्थको संसारमा सपनाहरु सँधै साँचा नहुन सक्छन् ।
कहिलेकाहीं वर्तमानका गाह्रा साह्रा परिस्थितिहरुले पनि पछिका दिनहरुलाई अझ मीठा बनाएर लैजान्छन् । मेरो अरु साथीका प्रेमीहरुले पनि उनीहरुलाई प्रेमोपहार दिनलागेका कुराहरुले मेरो मनमा पनि अनेक रहर जगाउछ । “म नै हो हजुरको जीवनको सबै भन्दा ठूलो उपहार” हजुरलाई चिच्याइचिच्याई भन्न मन लाग्छ ।
मध्यरातमा फोनमा हजुरसँग प्रेमालापको कुरा गर्ने इच्छा हुन्छ । मैले हजुरको खुशीमा आफ्नो खुशी देखे जस्तै हजुरले पनि मेरो खुशीमा आफ्नो खुशी देख्नु पर्ने होइन र ? दिनभरी कामबाट थाकेको मान्छे माम खाने बित्तिकै विछौनामा लुटिपुटि गरेर सुत्न मन लागि हाल्छ ।
म हरेक रात सुत्न अघि फोनमा हजुरको आवाज सुन चाहन्छु । अनि विहानै मलाई बिउझाउने आवाज पनि हजुरको होस् भन्ने हुन्छ । सकेसम्म हजुरले भनेजस्तै र अपेक्षा गरे अनुरुप हुन खोज्छु । प्रेम दिवसमा पनि त्यही रुपमा हजुरलाई निराश पार्न सक्तैनथेँ । त्यसैले हजुरले भने जस्तै गरेँ । हजुरलाई निराश पार्ने धृष्टता गर्ने आँट अब हराइ सक्यो । हजुरको लागि त सन्त भ्यालेन्टाइन भने पनि जे भने पनि म नै हो ।
आँशुहरु पुछ्ने हातहरु पनि मेरा नै हुन्छन् । ह्जुरको चित्त दुखाएर हजुरलाई बेलाबेला गलाएको छु तर हजुर लड्दा हजुरको लागि थापिने काँध पनि मेरै हुन्छन् । हो म पनि मान्छे हुँ, मेरा पनि कम्जोरीहरु हुन्छन् । हजुरलाई सँधै हजुरले अपेक्षा गरे अनुरुपका खुशीहरु दिन नसकौंला । म हजुरको प्रेममा अमर हुन चाहन्छु । बाँचुञ्जेल हजुरको अन्तिम साहरा बन्न चाहन्छु । हजुरकोलागि म कठोर हुने भनेको हजुरलाई म नहुँदाका परिस्थितिमा जुझ्न सक्ने बनाउनलाई हो ।
हजुर मसँग रिसाउँदा संसार रोकिएको हुँदैन । न त हजुरले गर्नु पर्ने कामहरु अरु कसैले आएर नै गरिदिन्छ । मैले हजुरलाई साथ नदिएका बेलामा पनि भूगोल घुमेकै हुन्छ । दिनरातहरु आफ्नै क्रममा चलिरहेका हुन्छन् । आँखिर समयको गति अनुसार हामीले चल्नु पर्ने हो न कि समयको गति हामी अनुरुप भइदिने हो । हजुरलाई कति भनौ कति सम्झाउँ यी कुराहरु । एक त हजुर विनाको जीवन पनि निरस निरस लाग्छ । एक्लै जीउन नसकिने होइन तर गाह्रो छ । साहारा हुनुहुनेछ भनेर हजुरलाई रोज्यो, उल्टै आफू नै साहरा बन्नु पर्छ ! अब हामिले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ ।
भन्छन् जति टाढा भयो माया उति नै गाढा हुन्छ भनेर, साँच्चि नै हो रहेछ । सँगै हुदा भन्दा टाढा हुदा माया झनै महत्व हुने रहेछ । मलाई यहि आभास हुदैछ ।
मौसम पनि उस्तै छ, समय पनि त्यस्तै छ । यति बेला धेरै याद गरी रहेको छु हजुरलाई । कहिलेकही पागल जस्तै भएर सक्दो चिच्च्याउन मन लाग्छ । तर के गर्नु हजुर सात समुन्द्रपारि हुनुहुन्छ ।
हजुर सुमधुर आवाजहरु मेरो कानले सुन्न र सुगन्धहरु मेरो नाकमा ठोकिने हरेक हावाहरुले ल्याएकै हुन्छ । साझ बिहान हजुरको लागी गर्ने प्रार्थना । दुई आत्माको पुकार भगवानले अवश्य सुन्ने छन् । जसले सात समुद्रपारी त के सात जन्मसम्म पनि नजिक्याउने छ । यतिखेर मैले महसुस गर्दैछु त्यो प्रणय दिवसको महत्व ।
आज बाध्यताले हामी यसरी धेरै टाढा छौं, हाम्रा जीवनका केहि आधारभूत आवस्यकताहरु पनि छन् जसलाई हामीले पुरा गर्नुछ । त्यहि कारण यसरी तड्पिएर बस्नु परेको छ । विदेश बस्ने मेरो कुनै सोच नै थिएन । तर हजुरले भन्नुहुन्थ्यो, हरेकको जीवन शून्यबाट नै सुरु हुन्छ । कालि पहिलाको दुःख र पछिको सुख पो राम्रो हो त भनेर । यसो भनी रहदा मैले हजुरप्रती गुनासाहरु जाहेर गर्न खोजेको हुदै होइन । बरु यस्तै सकारात्मक हजुरको सोचाईहरु मलाई सबैभन्दा मन पर्ने पक्षहरु हुन् ।
जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि मीठो हौसला दिने हजुर साहस भित्र छोरा मान्छेहरुको सबै रुप देख्ने गरेको छु । यहि कारणहरुले हजुर अन्धोभक्त भएर होला, आजकल धर्ती भरि हजुरको बिम्ब देख्न थालेको छु । आकाशमा भरि पनि हजुरकै प्रतिविम्ब देख्न थालेको छु । हाम्रो साच्चो मायाको प्रमाण यहि होला शायद ।
म हजुरको आँखा भित्र मिठो सितलता प्रदान गर्दै नबिझाउने लालगेडि भएर बाँच्न चाहान्छु । यो बिशाल आकाशमा स्वातन्त्र चखेवाको जोडी जस्तै भएर हजुर सगै संसार परिक्रमा गर्न चाहान्छु । मेरो चाहतकै कुरा गर्ने हो भने सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा बसेर हजुर सगै मुना–मदन पढ्न चाहान्छु । अनि मायामा के गर्न सकिन्छ भनेर दुनियाँलाई देखाउन चाहान्छु । मेरो कारणले कहिल्यै एक थोपा आशु खसाउनु नपरोस । हामीले बिछोडको वियोग खप्नु नपरोस म यहि चाहन्छु । बाच्दा हजुर सँगै र मर्दा पनि हाँसीहाँसी हजुर सगै मर्न चाहान्छु । अन्त्यमा ढिलै भएपनि प्रणय दिवसको हार्दिक शुभकामना टक्रयाउन चाहान्छु ।
उहीँ हजुरको काली
१२ फाल्गुन २०७७, बुधबार को दिन प्रकाशित